उपनिर्वाचनमा प्रतिपक्षभन्दा सत्ताधारी दोब्बर अगाडि
एक प्रदेशसभा गुमाउँदा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नेकपाले खोस्यो
शनिबार सम्पन्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकांश निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको छ । केही स्थानमा सत्ताधारी दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसबीच पद खोसाखोस भए पनि परिणाम अघिल्लो निर्वाचनकै जस्तो देखिएको छ । सत्ताधारीले राम्रो काम नगरेको भनेर आलोचना भइरहेको बेला सत्ताधारी नै यसअघिकै ‘पोजिसन’मा देखिएका छन् । एउटा प्रदेशसभा गुमाए पनि सत्ताधारी नेकपाले गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भने विपक्षी पार्टीबाट खोस्न सफल भएको छ ।
वडाहरुमा भएको निर्वाचनमा नेकपा र कांग्रेसको उस्तै–उस्तै अवस्था देखिएको छ । यद्यपि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि भएको निर्वाचनले नेकपालाई अझै ठूलो स्थान दिने अपेक्षा गरिए पनि पुरानै अवस्था देखिएको छ । केही गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नेकपाले जित हासिल गरे पनि मतान्तर भने खासै बढाउन सकेन । ती दुई पार्टी भिन्नाभिन्नै भएर निर्वाचन लड्दाको अवस्थाजस्तै देखिएको छ । यसले नेकपामा चरम गुटबन्दी र पूर्वमाओवादीलाई पूर्वएमालेका मतदाताले स्थानीय तहमा सहज रुपमा स्वीकार नगरेको देखिएको छ ।
पार्टी एकता भए पनि प्रदेशसभामा भक्तपुरमा नेकपाले हार खाएको छ । अलोकप्रिय व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको कारण पूर्वएमालेबाट मत नआएपछि नेकपाका डीपी ढकाल पराजित भएका छन् । त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका कृष्णलाल भँडेल निर्वाचित भएका छन् । तर, नेकपाले कास्की २ मा भने शानदार विजय हासिल गरेको छ । नेकपाकी विद्या भट्टराईले २४ हजार तीन सय ९४ मत पाएर विजयी भएकी छिन् भने नेपाली कांग्रेसका खेमराज पौडेलले १५ हजार नौ सय ९१ मत मात्र पाएका छन् । सो क्षेत्रमा जित्न कांग्रेसले ठूलो शक्ति परिचालन गरे पनि सफल हुन सकेन । साझा र विवेकशील नामका पार्टीले लज्जास्पद मत ल्याएका छन् भने पूर्वपञ्चहरुको समूहको पनि अस्तित्व मेटिने स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।
हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पद कांग्रेसबाट खोसेर नेकपाले लिएको छ । उपाध्यक्षमा नेकपाकी रुपा शाही विजयी भएकी छिन् । उनी यसअघिको निर्वाचनमा एमालेबाट उम्मेदवार बनेर पराजित भएकी थिइन् । त्यस्तै, राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता महन्थ ठाकुरको गृह गाउँ महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपाका विक्रम चौधरी निर्वाचित भएका छन् । उनी यसअघिको निर्वाचनमा एमालेबाट उम्मेदवार बनेर पराजित भएका थिए । यसअघि सो गाउँपालिकामा राजपा विजयी भएको थियो । उपनिर्वाचनमा राजपमा तेस्रो भएको छ ।
संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपाका तेजबहादुर पोखरेल विजयी भएका छन् । प्यूठानको ऐरावती गाउँपालिका–२ वडा अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर नेकपाका भिमेश कुमार घर्ती मगर विजयी भएका छन् । पार्टी केन्द्रले सो वडामा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सघाउने निर्णय गरे पनि स्थानीय नेता कार्यकर्ताले नमानेर नेकपाका उम्मेदवार उठाएर जिताएका हुन् । निर्वाचन आयोगले उनलाई स्वतन्त्र भने उनी नेकपाका उम्मेदवार हुन् ।
पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि कांग्रेसबाट नेकपाले खोस्ने देखिएको छ । यसअघिको निर्वाचनमा सो गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका थिए । बाग्लुङ र दाङमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि नेकपाको अग्रता छ भने धरान उपमहानगरपालिकामा नेकपा र कांग्रेसबीच प्रतिस्पर्धा छ । विद्रोहीसहित २५ वटा वडामा नेकपाका अध्यक्ष विजयी भएका छन् भने राजपा र कांग्रेसबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पनि नेकपाले खोसीसकेको छ । ११ वटा वडामा मात्र कांग्रेस विजयी भएको छ । धरान–७ को परिणम आइसकेको छैन ।
यस उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को प्रतिनिधि सभा सदस्य–१, प्रदेश सभा सदस्यतर्फ भक्तपुर जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को १, बागलुङ जिल्ला क्षेत्र नं. २ को २, दाङ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ को २ गरी –३ जना र स्थानीय तहतर्फ धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख–१, संखुवासभा जिल्ला मकालु गाउपालिकाको अध्यक्ष–१, पाँचथर जिल्लाको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको अध्यक्ष–१, महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकाको अध्यक्ष–१ गरी गाउँपालिका अध्यक्ष–३ जना, हुम्ला जिल्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष–१ र विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडाअध्यक्ष–४३ गरी जम्मा ५२ रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । यस उपनिर्वाचनमा ४ लाख ५४ हजार ११४ जना मतदाता रहेकोमा २ लाख ९७ हजार १ सय ३७ जनाले मतदान गरेको र यस उपनिर्वाचनमा सरदर ६५.४३ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो ।